slider Nylon avo lenta ho an'ny karazana milina fanorenana |
slider Nylon avo lenta ho an'ny karazana milina fanorenana
Ny slider nylon dia plastika enjeniera be mpampiasa, manakaiky ny sehatry ny indostria rehetra. Ny slider nylon dia misy fanoherana tsara sy fanoherana ny havizanana ary ny fahaizany manohitra ny hovitrovitra dia tsara koa. Ny tabataba vokarina dia ambany 2 ka hatramin'ny 4 heny noho ny an'ny slider vy.
Anaran'ny vokatra: fizotry ny famokarana Nylon Slider: famolavolana tsindrona / fanodinana centrifugal / fanodinana CNC
Tombony sy fampiasana ny slider nylon
tombony: Nylon slider dia vokatra plastika tena tsara, mateza kokoa noho ny slider vy. Ity fitaovana ity dia manana fiainana lava sy mahazaka fanoherana tsara. Ny fanoherana ny akanjo amin'ny nylon dia tsara noho ny vy. Mila soloina indray mandeha monja mandritra ny fotoana iasana ny vongan-dranon'i nylon, ary tsy mila fanosotra faharoa izay mampihena ny fanjifana sy mamonjy angovo. Nylon slider dia misy fiantraikany tsara amin'ny fanoherana, fanoherana ny havizanana ary fanoherana ny hovitrovitra, faharetana tsara, azo miondrika tsy misy fiovana, ary mitazona ny hamafiny ary manohitra ny fiantraikany miverimberina. Ny tabataba vokarina dia 2 ka hatramin'ny 4 heny noho ny vy mihetsiketsika. Ny fanoloana ny slider nylon amin'ny slider vy dia tsy vitan'ny hoe mamonjy ny vidin'ny fikolokoloana, fa mampihena ihany koa ny tsindry amin'ny fahalotoan'ny tontolo iainana.
Ampiasao: Ny fahamendrehana simika avo lenta, ny fanoherana ny alkaly, ny alikaola, ny etera, ny hydrocarbons, ny asidra malemy, ny diloilo manitra, ny detergents, ny rano (rano an-dranomasina), ary manana ny toetra tsy misy fofona, tsy misy poizina, tsy misy tsirony ary tsy misy harafesina, koa betsaka io ampiasaina Ny fampiasana ny faritra mekanika amin'ny harafesin'ny anti-alkali, ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fidiovana, ny sakafo, ny fanontana lamba ary ny fandokoana dia manome fepetra tena tsara
Jereo ny refin'ny fividianana
Antsipiriany momba ny fonosana: Matetika izahay dia mampiasa sarimihetsika bubble sy baoritra baoritra, raha ilaina dia mampiasa paleta hazo na boaty hazo. Ny entana madinidinika dia fonosina ao anaty kitapo fanaovana sonia tena + baoritra. Ny entana lehibe dia fonosina ao anaty kitapo hazo + boaty hazo
Previous: Nylon cushion miaraka amin'ny faharetana tsara sy ny toetra mekanika tena tsara
Manaraka: Manokana amin'ny famokarana slider nylon crane manana traikefa manankarena
Slider zippery nilona mainty
Slider ho an'ny Nylon Zipper
Slider miaraka amin'ny Nylon Zipper